गोकुल बाँस्कोटाले प्रश्न गर्दै भने - एकताको खिचडी पकाउन लागेकाहरु नै थाके कि के हो ? Canada Nepal
गोकुल बाँस्कोटाले प्रश्न गर्दै भने - एकताको खिचडी पकाउन लागेकाहरु नै थाके कि के हो ?
आषाढ ७ २०७८
काठमाडौं - नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पार्टि एकताको खिचडी पकाउनेहरु थाकेका हुन् भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता बाँस्कोटाले सो प्रश्न गरेका हुन् ।
पार्टी एकताको खिचडी पकाउन दत्तचित्त भएर लागेकाहरु थाकेका हुन की चुल्हो धुवाँएको पनि देखिएन भन्दै उनले नेताहरुबाट खासै प्रगति नदेखिएको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले पार्टी एकताका लागि अदालतमा बुझाएको सही फिर्ता लिने, जेठ ३ अघिको बैठक बस्ने कुरा कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले एकताको लागि नमान्ने भए छाड्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन् - 'एकताको खिचडी पकाउन दत्तचित्त भएर लागेका कमरेडहरु नै थाके कि के हो ? खिचडी पाक्ने त हो-होईन चुल्हो धुवाँएको पनि देखिएन कि असारे झरीमा झुर्का भेटिएन।अदालतमा बुझाएको सही फिर्ता लिने, जेठ३अघिको बैठक बस्ने।त्यो नमान्ने भए भो छोडदिम, झुर्का खोज्ने र टाउको दुखुन्जेल ढुङ्ग्रो फुक्ने काम।'
आषाढ ७, २०७८ सोमवार १४:४२:२२ बजे : प्रकाशित